Facelift ho an'ny Dictionary.com | Martech Zone
Alarobia 23, 2006 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Izaho dia mpamaky mazoto, saingy mahatsiravina amin'ny tsipelina, ny mari-tsoratra ary ny fitsipi-pitenenana. Mankanesa any amin'ny Dictionary.com aho rehefa tsy hitako izay dikan'ny teny iray. Androany rehefa mamaky aho Chip's Quip on Snark plenary Androany, tsy haiko hoe inona no resahany. Noho izany, nirenireny tany amin'ny Dictionary.com aho ary nahazo fiasan-tarehy izy ireo. Toa tsara fa heveriko fa nangalarin'izy ireo tamiko ny loko. (Mananihany)
Ary mbola tsy azoko ny atao hoe Plenary Snark. Tsy maintsy nankany Wikipedia aho mba hijery snark ihany koa. (Soso-kevitra: snide+fanamarihana). Ataoko fa tsy mampihomehy izany rehefa moana ianao.
Nefa, Snakes amin'ny a Plane toa tsara, ha?
23 Aogositra 2006 à 4:28
Hey Doug, teny mitovy amin'ny hoe "maro" no tiako holazaina, fa toa hoe "fiaramanidina". Somary ambany loatra amin'ny tahan'ny signal/noise miaraka amin'io teny io, heveriko.
23 Aogositra 2006 à 5:02
[Mihomehy aho] Nah, Chip – niezaka ny ho mampihomehy ihany koa aho. Farafaharatsiny fantatro izao ny dikan'ny plenaire!